राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा बेथिती : गोप्यता भंग हुने आशंका - Sabal Post
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा बेथिती : गोप्यता भंग हुने आशंका
ईश्वरराज ढकाल / काठमाडौं – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संचालन गर्ने कक्षा १० को एसइइ,कक्षा ११ र १२ का माध्यामिक तहको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने देखि डाटा इन्ट्री गर्ने सम्मको काम करारका कर्मचारीबाट हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने अति संवेदनशील काम करारका कर्मचारीबाट हुने भएपछि बोर्डको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बोर्डका उच्च अधिकारीका अनुसार करारका कर्मचारीबाट काम गराउनु परेपछि समस्या आउने गरेको छ । स्थायी भए पो कारबाही गर्ने ? करार कर्मचारीलाई के गर्ने, उनीहरु नभए कामै गर्न सकिदैन–बोर्डका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने । गतवर्ष एसइई परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा त्रुटी नै त्रुटी भएपछि बोर्डको चर्को आलोचना भएको थियो ।
हाल परीक्षा बोर्डमा मुख्य इन्जिनियर गोविन्द पाण्डे, सहायक इन्जिनियरद्धय दीपेन्द्र थापा र सुप्रिज्ञा देवकोटा करारका कर्मचारी हुन । ती कर्मचारीले परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुअघि विद्यार्थीको तथ्याङक संकलन, डाटा इन्ट्री, प्रोसेसिङ र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरेका छन् ।
अति गोप्य काम गर्दा करारका कर्मचारीको प्रयोग भएपछि बोर्डले करिब डेढ वर्ष अघि तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसंग स्थायी कर्मचारीको माग गरेको थियो । करारका कर्मचारीले कतिपय अवस्थामा प्रश्नपत्र टाइप गर्नेसम्मको काम गर्ने गरेका छन् ।
परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने कर्मचारी करारमा रहेको बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणी पौडेलले बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–करारका कर्मचारी भएपनि गोप्य काममा कुनै समस्या आएको छैन । कक्षा १० को परीक्षा संचालन गर्ने निकाय तत्कालिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बोर्डको मातहतमा आएपछि बोर्ड अन्तर्गत तीन वटा परीक्षा जिम्मेवारीभित्र पर्ने गरेको छ ।
करारका कर्मचारीको भरमा १६ लाख बिद्यार्थीको भबिष्य
यो वर्ष चैत १० गतेदेखि संचालन हुने कक्षा १० को एसइई परीक्षामा करिब ६ लाख, आगामी बैशाख १५ गतेबाट संचालन हुने कक्षा १२ र २९ बाट संचालन हुने कक्षा ११ को परीक्षामा झण्डै १० लाख गरी १६ लाख विद्यार्थीको परीक्षा सम्पन्न गर्ने काम बोर्डले गर्ने छ । बोर्डले डेढ वर्ष अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली र करिब आठ महिना अघि संगठन संरचनाको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
मन्त्रालयले नियमावली र रिपोर्ट स्वीकृत नगर्दा बोर्डका अधिकासं कर्मचारी करारमा काम गर्न बाध्य छन् । परीक्षा मात्र होइन बोर्ड अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश कार्यालय सहित १२ कार्यालयको लेखा शाखा प्रमुख सहित अधिकांस कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेका छन् ।
बोर्डमा ३ सय ४० कर्मचारी मध्य करिब २ सय कर्मचारी करार र ज्यालादारीका छन् । बोर्डका अधिकांश कर्मचारी करारका भएपछि बोर्ड आफै समस्यामा परेको छ । बोर्ड अन्तर्गत प्रदेश कार्यालयका अधिकांस लेखाका कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेका छन । बोर्ड मुख्यालय लगायत अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मध्य लेखा शाखा र परीक्षा सम्बन्धी काम गर्ने अधिकांस कर्मचारी करारकै भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले परीक्षाका प्राविधिक,सबै प्रदेश र अन्य कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी माग गर्ने गरी नियमावली तयार गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारी भने नियमावली स्वीकृत गर्ने विषयमा चासो देखाएकै छैनन । मन्त्रालयका अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐन आउन लागेको अवस्थामा बोर्डको नियमावली आवश्यक नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । मन्त्रालयले फागुन २१ गतेभित्रै संघिय शिक्षा ऐन ल्याउने भएको छ । ऐन ल्याएपछि बोर्डको संरचनानै परिवर्तन हुने भएपछि मन्त्रालयले बोर्डले दिएको रिपोर्टको बारेमा चासो दिएको छैन ।
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण: शव र भिडियो ‘फोरेन्सिक’…
१७ वर्षीया किशाेरीको बलात्कारपछि हत्या
अमेरिकी राजदूत बेरीले दशैंको टीका लगाए
कोरोनाका कारण विश्वभर १० लाख संक्रमित, ५३ हजार वढीको मृत्यु
शिरानटेकले समाचार डिलेट गरेको स्विकार गर्दै माफि माग्यो
कहिले ढल्ने हो यो लामो रात ? : रवीन्द्र समीर
सुनौली नाकाबाट उद्धार गरिएकी २३ दिनकी सुत्केरीको दिल्ली–नेपाल यात्रा ।
सुगर र प्रेसरका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम
आज २०७६ चैत २१ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस
थुनुवामा रहेको वन्दी झुण्डिएको अवस्थामा फेला
कोरोना संक्रमित २ लाख निको भए
कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले सम्म ९ सय ५४ सैयाको Quarantine निर्माण